janvier 2018 - Page 3 sur 75 -
Baritsialonina Alisoa (mpanondrana volamena) : Tsy namaly ny fampiantsoan’ny polisy
31/01/2018 admintriatra 0
Talohan’ny namoahana taratasy fampitadiavana, na “avis de recherche” mahakasika an’i Baritsialonina Andriafanantenana Alisoa, dia fantatra fa efa nandefasan’ny teo anivon’ny polisim-pirenena taratasy fiantsoana ity lehilahy voarohirohy amin’ny resaka fanondranana volamena an-tsokosoko ity saingy tsy namaly …Tohiny
Polisy kaominaly (CUA) : Polisy kaominaly (CUA)
Manao fanamparam-pahefana. Nitrangana olana indray teo amin’ny polisy kaominaly avy amin’ny kaominina Antananarivo Renivohitra (CUA), ny alatsinainy 29 janoary teo. Rehefa nanatanteraka fidinana ifotony nanala ireo mpivarotra amoron-dalana mantsy ireto polisy kaominaly miisa valo teo …Tohiny
Fandrobana teny Ambohidratrimo : Vola an-tapitrisany no voaroba
Nitrangana fanafihan-jiolahy tany Ambohidratrimo fokontanin’Ambatolampy Tsimahafotsy ny alin’ny alahady 28 janoary lasa teo. Fantatra tamin’izany fa nanomboka tamin’ny 11 ora sy sasany teo no nahenoan’ny tompon-trano ireo jiolahy teo am-piomanana hanao ny fanafihana. Naheno izany …Tohiny
Fifidianana 2018 : Nanamafy ny fanohanany an’i Madagasikara ny OIF
Mandalo eto Madagasikara ankehitriny ny delegasiona avy amin’ny « Organisation Internationale de la Francophonie » (OIF). Antony goavana amin’izany fitsidihana izany ny fihainoana sy fanarahana ny mahakasika ny fanomanan’i Madagasikara ny fifidianana 2018. Marihina mantsy …Tohiny
Mitohy hatrany ny asa fampandrosoana ataon’ny Filoham-pirenena Rajaonarimampianina Hery. Toa ny nataony tany amin’ny faritra maro teto amin’ny Nosy dia nahazo ny anjarany ihany koa ny distrikan’Ambato Boeny. Fotodrafitrasa fototra izay tena manala fahasahiranana ny ...Tohiny